कामरेड, शहीदको घरमा कसरी जाउँ ? – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » कामरेड, शहीदको घरमा कसरी जाउँ ?
लुंगि वेरेर लौरो टेकेको मुन्छे घरको आँगनमा आइपुग्दा उनलाई मैले ठम्याउन सकिन । मेरो घरको छेउमा मन्दिर छ तर मुलबाटोबाट मन्दिर सम्म निस्कने गोरेटोमा झरेको पात पतिगंरले पनि कोही आउने छनक दिएका थिएनन् ।
गोँधुली वरपर मात्रै म र. स्यांजाका तारा भुसाल .उराम देखि घर आइपुगेका थियौं । खोर पोखरा, डुंड, चिलुवा, त्रिवेणी, स्यानो स्वामी (बगरको बाटो), हुवास, जैविरे, हुँदै घरसम्म आईपुग्दाको भेटघाट स्मरण र थकाई मेटान राम्रोसँग गर्न भ्याइएको थिएँन ।
बाहिर गफ गर्दागर्दै भित्र भात पाक्नेु हाम्रो घरको परंपरालाई विश्वास गर्दै ढोका खोलेर म भित्र गएको थिइँन ।
हाम्रो भलाकुसारीलाई राम्रोसँग सुन्दै होला भनेको त सुन्दर पनि कता गइहालेको रहेछ । म, ताराजी र तिनै श्रद्येय पाहुना कमरेड ३ जना गफ गर्दा गर्दै निदको लखेटाइमा परीसकेका थियौं । ज्यान भोको थियो । फेरि झ्यालबाट भित्र हेंरे, भित्रको चुलामो आगो बलेको देखिन । जुनीमा एकपटक पाइला टेकेका आस्थाका धरोहर भने भोकले सिरानी थिचेर यता र उता पल्टेको आफ्नै आँखाले हेर्न बाध्य भएँ ।
मेरो निधार चिट चिट भयो, पसीना र चापले मलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो । म आफैं दैलो खोलेर मझेरीमा पुग्दा देखे । देवी,सीता र भगवती छोरीहरु भित्र निदाइरहेका रहेछन । मलाई रिस उठेको त थियो, तर रिसमा संयमता अपनाउनु पर्छ भन्ने मैले छोरीहरुलाई गाली गर्न सकिन र अनुरोध गरे ।